Is-bar-bar dhiga lacagta diiwaan-gelinta musharaxiinta u tartamaya xildhibaannimada ee 2016/17 iyo 2020/21 – Kalfadhi
October 3, 2020 October 3, 2020 Hassan Istiila
Lacagta diiwan-galinta Musharaxiinta u tartamaya Aqalka Golaha Shacabka iyo Aqalka Sare ayaa sannadkan la kordhiyay, marka loo eego doorashada sannadkii 2016/17.
Tusaale ahaan lacagta diiwan-galinta musharaxiinta u tartamaya Aqalka Sare, waxay noqonaysaa $20,000 (labaatan kun oo dollar) musharax kasta. Halka sannadkii hore ee 2016/17 ay aheyd $10 (Toban kun oo dollar) musharax kasta.
Dhinaca kale, lacagta diiwan-galinta musharaxiinta u tartamaya Golaha Shacabka, waxay noqonaysa $10,000, (Toban Kun oo dollar) musharax kasta. Halka sannadkii hore ee 2016/17 ay aheyd $5 kun oo dollar.
Hoggaamiyaasha siyaasada dalka, ayaa isku raacay in lacagta diiwan-galinta musharaxiinta aan dib celin-doonin.
Falanqeeyayaal siyaasadeed oo Kalfadhi la hadlay, ayaa sheegay in siyaasiyiinta xilka hayay ay qiimeyntooda ku saleyeen lacagta ay heystaan iyo jeebkooda, madaama dhallinyarada halkan siyaasadeed ku jira aysan ka bixi karin lacagta tirada badan ee ay shuruuda ka dhigeen.
Habeen ka hor ayaa la soo saaray Habraaca Hirgalinta Heshiiska Siyaasadeed ee Hagaya Doorashada 2020/2021 ee heer Federaal, kuwaasoo isugu jira dhismaha Guddiyada kala duwan ee doorashada iyo Guddiga xalinta khilaafaadka.
Guddiga horumarinta Haweenka ee Baarlamaanka Puntland oo la kulmay Taliyaha qeybta Booliska Gobolka Mudug
Anigoo ah Cali Maxamed Geedi, Ra’iisul Wasaarihii Hore ee Soomaaliya, Hoggaamiyaha Xisbiga Waddaniga Soomaaliyeed -XWS- (Somali...